Izambatho Zeenwele 2014
Imfashini yabasetyhini Imizila
Izixhobo zeenwele ziye zasetyenziselwa ixesha elide kwiinjongo zokucoceka ukugcina iinwele ze-scalp ngokufanelekileyo, kunye nokunika iinwele indawo efanelekileyo. Baye bahlulwa ngamagqabi kunye ne-stilettos, i-braids yafakwa kwi-braids, iirebhoni ...
Izixhobo zeenwele zingenziwa zenzelwe:
ukunika ifom efunekayo kunye nomhlobiso weenwele (izixhobo ezicokisayo);
ukunakekelwa kweenwele zemihla ngemihla.
Kwaye ngoku ubuninzi bazo zonke iintlobo zezinto zokubhabhisa iinwele ziya kukunceda wenze ngokukhawuleza i-hairstyle enhle neyokuqala. Ukutshintsha iifowuni zokuhlobisa, umfazi ngamnye uya kukhangela ngendlela entsha.
Kwizinto eziphambili zesebe ziyakucingwa njenge-gum, i-kanzash (izinwele zezinwele) kunye nama-bandages elastic. Ibhanti ye-elastic ikulungele ukunciphisa iinwele, ukuba zihlanganisane zibe yintonga. Iinqwelo ze-multicolored zihlotshiswe ngeentlobo, iintyatyambo, izambatho, amanani amaninzi ngendlela yezinambuzane, izilwanyana. Kodwa zifaneleke ngakumbi kumantombazana amancinci. Izintambo zeenwele zikulungele ukusetyenziswa kwekhaya. Basenokukhawuleza batyeke iinwele, ukuze bangaphazamisi ngexesha, umzekelo, ukucoca indlu. Ukuba ukuphela kwetonga ukulungisa umhlobiso wokubhabisa, ufumana indawo enobumnandi kakhulu, onokwenza ngayo iinwele zangaphambili. Amathanga e-elastic afanelekileyo afanelekileyo kwabasetyhini abaqinileyo. Ukuthabatha i-bandage efanelekileyo kwiinkcukacha ezisisiseko ze-wardrobe, ungakhangela kakhulu.
Iimitha kwixesha elitsha zihluke kakhulu
Ubunzima, ubukhulu obuphakathi kunye nobubanzi. Izinto eziphambili zeerms is plastiki. Zihlotshiswe ngelikalika, i-velvet, ubuhlalu, ubunqabileyo, amatye, i-paillette, njl.
Iimpawu ezivela kwiifayile eziqinileyo zifana neengubo ezicocekileyo kwisitayela se-Retro. Ngenxa yokwenza kwabo, iingubo (isiliki, i-velvet), inwele yokufakelwa, iikhumba zazisetyenziswa. Bayihlobise ngeentyantyambo kunye nezinto ezinokubhenela, zixeliswe ngoncedo lokusika amatye anqabileyo.
Izinto ezifanelekileyo zizinwele zeenwele ezinobunzima, ubuhlalu kunye nezinye izinto zokuzihombisa. Eyathuthuzelayo kwaye elula ukuyisebenzisa, iyakwazi ukukhupha, kodwa ngokugqithiseleyo igcizelela ubuhle bezinwele zakho.
Kubonakala ngasekupheleni kwee-60-ies barrette-zixhobo ezizenzekelayo zilungele ngokufanelekileyo kwiimpahla zangaphantsi zowesifazane zanamhlanje. Abaqambi 100% basebenzisa lo mhlaba wonke uthando uthando lweenwele. Ukususela kwiintlobo ezahlukeneyo, amehlo abo asabela. I-hairpin ayinzima ukuhambelana naluphi na uhlobo lwesambatho. I-monochromatic eqinile okanye eboshwe ngeempawu zerhinni zifaneleke ngokufanelekileyo kumfanekiso wezoshishino, kwaye zihlotswe ngeempawu eziqhayisekileyo kunye neefigtails ziya kuba yintsusa ekuzaliseni isitala somtsha. Izibonda zeenwele ezibomvu zenziwe ngeplastiki, i-bioplastic, isinyithi, zihlotswe ngeengubo, zihlotshiswe ngezinto ezihlobisayo zeenwele zesikhumba ixesha elide kwaye zilungelelanise ubomi bemihla ngemihla kwaye aziyi kunika izikhundla zabo.
Izixhobo ezikhoyo zamanqaku ezicatshulwayo azenziwanga nje kuphela ngokusetyenziswa kwendlela yokubambisa - intsimbi yesinyithi, kodwa kunye nobuchwepheshe obutsha baseYurophu - usebenzisa iirubha yeerubha ephezulu.
Amachule kunye neebhanana zeenwele kulula ukuyisebenzisa kwaye unokukwazi ukuyila kunye nombala othakazelisayo. Izinto ezisemgangathweni kule fomu elula yesikhumba seplastiki, isinyithi isetyenziswe rhoqo (imveliso yensimbi inzima kakhulu, ayibambe kakuhle kwizinwele). Ukuhlobisa izikhonkwane zolu hlobo, izixhobo zokugqoka, iiglasi kunye neengqimba zivame ukusetyenziswa.
Intshukumo yexesha lexesha liyi-crests. Okukhulu, ehlotswe ngemifanekiso kunye neengqungquthela, ziyongezelela kakhulu kwiintlo zezinwele ezimnandi.
Ulungelelanisa ngokunyanisekileyo iinwele kwaye uhlobisa i-hairstyle ye-hairpin-comb kwisitayela sevini. Ngokuncedwa ngumkhiqizo onjalo, unokwenza i-hairstyle, umzekelo, ukufaka isithambiso okanye igoboliti yeenwele, ngokufanelekileyo wenze ifowuni engavumelekanga.
Izixhobo zeenwele zokusetyenziswa kwansuku zonke ziyafumaneka kuwo onke amabhinqa. Ezi zi-combs kunye ne-massage brushes.
Ezi zixhobo zikhethiweyo kuxhomekeke kubuxininisa nohlobo lweenwele. Iimveliso ezinoncedo kakhulu zivela kwizinto zokwenza izinto ezingokwemvelo ngaphandle kokubambisa nge-varnish.
Ngoku ngoku kuthengiswa kunokwenzeka ukufumana iinwele zokuhlambalaza kunye nezinto ezincedo eziqulethwe kuzo.
Ukuqulunqwa, kuyaqatshelwa ukuba ngo-2014 bonke abafazi befashoni banikezwa ithuba lokuthenga i-accessory eya kudibana nayo yonke imfuno yazo.
Iifutshane zemifanekiso zonyaka ka-2014: ukulungeleka, ubuhle, ubuchule
Iindidi ezi-3 zee-wardrobe zanamhlanje: indlela yokujonga isitayela kunye nefanelekileyo emsebenzini
Yintoni okufanele ibe yinto yokupaka
"Ubunzima" bhulukhwe: umendo-2016
Iingubo ezimfutshane ezihamba phambili zokugqiba i-2016
Ezemidlalo zeChic zisuka kwi-Face Stockholm kunye neReebok
I-Easter i-banana-chocolates muffins
Idayarrha kubantwana abancinci
Indlela yokwenza uthando ngokuchanekileyo, yintoni okufanele ibe yinto yokuqala
Iimpawu kunye nesondlo esifanelekileyo kwi-colitis
Indlela yokubeka ingqalelo kwindoda yaseTaurus
Iimpawu zamabhinqa ezidumile emhlabeni wonke
Iindlela ezifumanekayo zokulwa nokuxinzezeleka
Ukutya okukhawulezayo ekhaya - ipakeki emnandi, iindlela zokupheka ezingcono kunye nesithombe
I-Burgers ene-turkey, isilimi kunye noshizi
Indlela yokufunda ukubonisa izimvo zakho
Ukungabi nesidlo kwiintsana ezisanda kuzalwa
Imincintiswano yoSuku loMama iholide esikolweni nasezikhunjini - Iziganeko zemincintiswano ehlekisayo yoomama nabantwana
Jam kusuka kwi-physalis
Indlela yokunciphisa intlungu ngexesha lomsebenzi, ukuphefumla
Ngaba umntu uyakhathala ngumfazi omthandayo?